Wethulelwe isigqoko ngomsebenzi oncomekayo | News24
Wethulelwe isigqoko ngomsebenzi oncomekayo
Okhulumela amaphoyisa aseSundumbili, uKaputeni Gideon Mthethwa uncome uzakwabo u-Constable Bhekabakubo Mduduzi Madela ngomsebeniz muhle awenzile. x
OKHULUMELA amaphoyisa aseSundumbili, uKaputeni Gideon Mthethwa uncome uzakwabo u-Constable Bhekabakubo Mduduzi Madela, oneminyaka engu-32, osebenzela esiteshini saseSundumbili, ngomsebenzi awenzile oqinisekise ukuthi amacala amabili ahlukene aphetha ngokuthi abasolwa banikezwe izigwebo.
UMnuz Mthethwa uthe ngenxa yomsebenzi oncomekayo owenziwe uMnuz Madela, uMnuz Mbongiseni Pollen Undertaker Ngema, oneminyaka engu-33, unikezwe isigwebo seminyaka engu-15 yiNkantolo yeMantshi yasEshowe ngecala lokubulala.
UMnuz Mthethwa uqhube wathi uMnuz Ngema waboshwa uMnuz Madela ngonyaka ofile ngecala lokubulala kanti ngenxa yomsebenzi kaMnuz Madela inkantolo ikwaze ukudlulisa lesi sigwebo.
Kwelinye icala, uMnuz Mthethwa uqhube ngokuncoma uzakwabo ngomsebenzi awenzile oqinisekise ukuthi uNks Sibekezelo Ndimande, oneminyaka engu-35, uthole isigwebo seminyaka engu-10 esikhishwe yiNkantolo yeMantshi yasEshowe ngecala lokugwaza abulale isisulu sowesifazane ngonyaka ofile.
“UMnuz Madela usesebenzele amaphoyisa iminyaka emihlanu kanti futhi indlela asebenza ngayo ikhombisa ukuthi ukhuthele futhi uzinikele ekwenzeni umsebenzi wakhe. Uyisibonelo esihle kwamanye amaphoyisa. Lezi zigwebo zizosiza ngokuthi kwehle izinga lobugebengu endaweni yakithi,” kusho uMnuz Mthethwa.